Ciidamada huwanta oo la wareegay deegaanka Bariire ee Gobolka Sh/Hoose
Wararka ka imaanaya deegaanka Bariire ayaa sheegaya in Ciidamada xoogga dalka oo taageero ka helaya ciidamada AMISOM iyo Ciidamo Mareykan ah ayaa la wareegay deegaankaas, kaddib dagaal xooggan.
Hooyo labo caruur ah oo ay dhashay si aan ula kac aheyn ugu dishay deegaan hoostaga Wanlaweyn
Wararka naga soo gaaraya gobolka Sh/hoose, ayaa sheegaya in hooyo Soomaaliyeed si aan ula kac aheyn ugu dishay deegaan hoostaga degmada Wanlaweyn caruur ay dhashay.
Maamulka Shabeelaha Hoose oo ka hadlay deegaanno ay Ciidamada Dowladda dib uga soo baxeen.
Guddoomiye ku xigeenka dhanka arrimaha Bulshada Maamulka Gobolka Shabeelaha Hoose ee dowladda Soomaaliya Cumar Max’ud Cilmi Carabeey ayaa ka hadlay warar sheegaya in Ciidamada dowladda deegaanno gobolka ka tirsan ay dib uga soo baxeen fariisimayaal ay ku lahaayeen.
Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa saakay la wareegay deegaano ka tirsan Gobolka Shabellaha Hoose, kadib dagaal xalay ka dhacay deegaanada Gendershe iyo Jilib Marka oo ay ku sugnaayeen xoogaga Al-Shabaab.
Dagaal xoogan oo ka socda deegaanka Muuri oo ku dhaw lambar Konton
Dagaal udhaxeeya maleeshiyaad hubeysan oo qaab beeleed u abaabulan ayaa waxa uu saaka mar kale ka socdaa deegaanka Muuri ee gobolka Shabellaha hoose.
Ciidamo ku hubeysan gaadiidka dagaalka oo si nabad kula wareegay deegaanka Nambar 50
Wararka ka imaanaya deegaanka Nambar 50 ee Gobolka Shabellaha Hoose ayaa sheegaya in ciidamo ku hubeysan 11-gaadiidka dagaalka ay saakay waabarigii hore gaareen deegaankaas, iyadoo maleeshiyadii deegaanka ee horay ugu sugnaa ay isaga baxeen.
Dagaallo u dhexeeya Ciidammo ka Tirsan Dowladda Somalia oo hab beeleed u abaabulan oo ka Qarxay Gobolka Shabeellada Hoose
Dagaallo u dhexeeya ciidammo kawada tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo hab beeleed u abaabulan ayaa saakay ka qarxay deegaanno ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose, dagaalkan ayaa daba socda dagaallo horay uga dhacay gobolkaas.
Qaraxya ayaa xalay waxa ay siyaaba kala duwan ugu kala dhaceen qeeba ka mid ah G/Sh/Hoose
Sagal Radio Services • News Report • October 20, 2013
Xili ay magaalooyinka marka iyo Afgooye ay isaga soo baxaan Ciidamadii amaanka ee Booliska iyo nabad Sugida ayaa hada waxaa inta badan ka dhacaya Qaraxyo ay geysanayaan maleeshiyaad sida la tuhun sanyahay gacan saar la leh Al-shabaab